Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Scalp Fungus ဆံပင်မှို
Scalp Fungus ဆံပင်မှို
Tue, Nov 20, 2012 at 8:03 AM
ဆံပင်မှိုတက်တဲ့ရောဂါအကြောင်း သိချင်လို့ပါဆရာ။ ဆိုဒ်ထဲမှာရှာတာ မတွေ့လို့ပါ။
• ဆံပင်ကိုမှိုတက်တာ လူဆီကနေကူးလာလာ၊ တိရစ္ဆာန်ကနေကူးလာလာ ကုသရတာ အတူတူပါ။
• ဆံပင်သာမက မုတ်ဆိတ်မွှေး၊ ကိုယ်မွှေးတွေမှာပါ မှိုပိုးကူးစက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
• မှိုဆေးတွေက ဆေးပြား၊ ဆေးရည်နဲ့လာတယ်။ ဆေးကို ၄ ပတ်ကနေ ၁၂ ပတ်ကြာသုံးရတတ်တယ်။
• Antifungal shampoo ခေါင်းလျှော်ရည်လဲလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီတမျိုးတည်းနဲ့ မပျောက်ပါ။ သုံးရင် တရက်ခြာ၊ တပတ်ကြာသုံးရတယ်။
• Antifungal shampoos ခေါင်းလျှော်ရည်ကို အလွယ်ဝယ်ရတာနဲ့ ဆေးလက်မှတ်နဲ့သာ ဝယ်ရတာနှစ်မျိုးရှိတယ်။ အထဲမှာ selenium sulfide နဲ့ ketoconazole ဆေးတွေပါတယ်။ တချို့ထဲမှာ povidone ပါတတ်သေးတယ်။
• Home Remedies အိမ်သုံး၊ အရပ်ပြောဆေးနည်းတွေတော့ရှိပေမဲ့ အာမခံချက်မရှိပါ။
• ဘီး၊ ဦးထုပ်၊ ခေါင်းစီး၊ ဆံညှပ်၊ ခေါင်းအုံးစွပ် စတာတွေကိုပါ ဆေးကြောသန့်ရှင်းရပါမယ်။
• ခေါင်းလျှော်ပြီးရင် ဆံပင်ကိုခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပါ။ စိုထိုင်းနေရင် မှိုကကြိုက်တယ်။
• မှိုပိုးဝင်တဲ့နေရာကဘဲ ဗက်တီးရီးယားဝင်တာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ပဋိဇီဝဆေးပါလိုနိုင်တယ်။
• (အလာဂျီ) ဖြစ်စဉ်ပါဝင်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ ယားမယ်၊ နီရဲမယ်။ အဲလိုဖြစ်ရင် မှိုသေဆေးသာမက corticosteroid (prednisone) ကော်တီဇုန်းဆေးပါ လိုမယ်။
• Antifungal medication မှိုဆေး (၃) မျိုးကို အများဆုံးသုံးတယ်။
- Griseofulvin (ဂရစ်ဆိုဖူလ်ဘင်)၊
- Allylamines (terbinafine) (တာဘင်နဖိုင်း) နဲ့
- Azoles (including itraconazole, ketoconazole, fluconazole) ဆေးတွေဖြစ်တယ်။
• Griseofulvin (Grifulvin V) စားဆေး၊ မှိုတွေကြီးထွာမလာစေအောင်လုပ်တယ်။ ၄-၁၂ ပတ်သောက်ပါ။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ဗိုက်အောင့်မယ်၊ ခေါင်းကိုက်၊ နေလောင်မခံနိုင်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေး၊ သွေးကျဲဆေးတွေနဲ့ တွဲမသောက်သင့်ဘူး။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင် မသင့်ဘူး။ ပနယ်စလင် မတည့်သူတွေလဲ မသင့်ဘူး။ နွားနို့ပါတဲ့အစာနဲ့တွဲသောက်ရင် ဆေးကိုသွေးထဲရော်ကအောင်မြန်စေတယ်။
• Allylamines စားဆေး၊ (လိုးရှင်း) လိမ်းဆေး၊ (ခရင်မ်)၊ Terbinafine ဆေးဖြစ်တယ်။ ဆိုင်မှာ Lamisil နာမည်နဲ့ ရောင်းတယ်။ လိမ်းဆေးတခုတည်းကသိပ်မထိရောက်လို့ စားဆေးနဲ့တွဲသင့်တယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ ကတော့ ဗိုက်အောင့်မယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရင် မသောက်သင့်ဘူး။ အရက်နဲ့မတွဲသင့်ဘူး။
• Azoles စားဆေးတွေက fluconazole (Diflucan) နဲ့ itraconazole (Sporanox) တွေရှိတယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ လိမ်းဆေးက Ketoconazole (Nizoral) ဖြစ်တယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ဗိုက်အောင့်မယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ အရေပြားအနီပြင်ထွက်၊ အသဲထိခိုက်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်နေရင် မသောက်သင့်ဘူး။ ၂ နာရီအတွင်းမှာ antacids လေနာဆေးမသင့်ဘူး။ အရက်နဲ့မတွဲသင့်ဘူး။
Griseofulvin ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာ မပေးရပါ။ အသဲမကောင်းသူကိုလဲ မပေးရပါ။
Griseofulvin (ဂရစ်ဆိုဖူလ်ဘင်) မှိုဆေး လူကြီး
- Onychomycosis (Fingernail) လက်သည်းမှို
Microsize formulation: 1000 mg/day ကို တနေ့မှာ ၂-၄ ခါခွဲသောက်ပါ။
Ultramicrosize formulation: 660 to 750 mg/day oကို တနေ့မှာ ၂-၄ ခါခွဲသောက်ပါ။
- Adult Dose for Onychomycosis (Toenail) ခြေသည်းမှို
Ultramicrosize formulation: 660 to 750 mg/day ကို တနေ့မှာ ၂-၄ ခါခွဲသောက်ပါ။
- Adult Dose for Tinea Pedis အားကစားသမားခြေထောက်
- Adult Dose for Tinea Barbae
Microsize formulation: 500 mg/day ကို တခါတည်း ဒါမှမဟုတ် ၂ ခါခွဲသောက်ပါ။
Ultramicrosize formulation: 330 to 375 mg/day ကို တခါတည်း ဒါမှမဟုတ် ၂ ခါခွဲသောက်ပါ။
- Adult Dose for Tinea Capitis
- Adult Dose for Tinea Corporis ကိုခန္ဓာ မှို
Microsize formulation: 500 mg/day orally in single or2divided doses
- Adult Dose for Tinea Cruris ဂျွတ်
- Pediatric Dose for Dermatophytosis Griseofulvin (ဂရစ်ဆိုဖူလ်ဘင်) မှိုဆေး ကလေး
Microsize formulation: 1 year or older: 10 to 20 mg/kg/day ကို တခါတည်း ဒါမှမဟုတ် ၂ ခါခွဲသောက်ပါ။ 1000 mg/day ထက်မပိုရ။
Greater than2years:5to 15 mg/kg/day ကို တခါတည်း ဒါမှမဟုတ် ၂ ခါခွဲသောက်ပါ။ 750 mg/day ထက်မပိုရ။
Oral Antifungal Medicine for Fungal Nail Infections လက်သည်း-ခြေသည်းမှိုဆေးများ
1. Allylamines = Terbinafine (Lamisil) 250 mg/day
Terbinafine tablets ကို လက်သည်းမှိုအတွက် တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၆ ပါတ်သောက်ပါ။ ကို ခြေသည်းမှိုအတွက် တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၁၂ ပါတ်သောက်ပါ။
2. Azoles = Fluconazole (Diflucan), Itraconazole (Sporanox), Ketoconazole
Oral azoles စားဆေးကို ၃-၁၈ လအထိသောက်ရတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 1:55 PM